ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve
Cover ezimangelengele perforated (abicah + plastic) ngoba BlackBerry 9360 / 9370 Curve — kuyindlela enhle ukuvikela smarfon kusuka ezingezinhle namathonya zangaphandle. Case siqukethe izingxenye ezimbili zokuphepha: obukhulu abicah base, omuhle ukushaqeka ukumuncwa futhi elula plastic Uhlaka, ekuvikeleni eyengeziwe.
Case ivikela hhayi kuphela smartphone yakho, kodwa futhi agcizelela ubuntu bakho! Isakhiwo eyingqayizivele perforated izingxenye plastic lihambisana smooth abicah ukuthungwa ubukeka kakhulu, yimpumelelo inhlanganisela yemibala ngokuhlakanipha ukugcizelela it. Phambi anhlobonhlobo imibala kusuka classic kuya namanzi elikhanyayo.
Purple / okusajingijolo
Pink / okusajingijolo
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black / Black 9360CASE-VN-BK ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, White / White 9360CASE-VN-WT ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black / Red 9360CASE-VN-BKRD ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Blue / Blue 9360CASE-VN-BU ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Purple / okusajingijolo 9360CASE-VN-PPPN ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Pink / okusajingijolo 9360CASE-VN-RSPN ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Lilac / Fuchsia 9360CASE-VN-LF ●
Black / Red 9360CASE-VN-BKRD
Purple / okusajingijolo 9360CASE-VN-PPPN
Pink / okusajingijolo 9360CASE-VN-RSPN